Umehluko phakathi kwesitezi sepulasitiki nesitezi esiqinile sokhuni - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Umehluko phakathi kwesitezi sepulasitiki nesitezi esiqinile sokhuni
Hlela: UDenny　2020-03-26　Iselula
Izindawo zemidlalo zibandakanya izinkantolo ze-basketball, izinkantolo ze-badminton, izinkantolo ze-volleyball, izinkantolo ze-tennis, izindawo zokuzivocavoca, njll., Okubhekiselwa kuzo izinkantolo zezemidlalo zasendlini. Amakamelo adwetshwe kulezi zindawo zemidlalo ikakhulukazi ayizitezi zemidlalo yamapulangwe namabhola ezemidlalo e-PVC. Eminyakeni yamuva nje, izindawo ezande ngokwengeziwe zezemidlalo seziqale ukukhetha ukubekwa phansi kwezemidlalo kwe-PVC, ikakhulukazi izindawo zemincintiswano ezingezona ezobuchwepheshe, izinkundla zemidlalo, izindawo zokuqeqesha, njll .ukukhetha kokuqala kwephasiji lezemidlalo le-PVC.
Ukuphakama kwezemidlalo kwe-PVC ukukhetha okokuqala kwezindawo zemidlalo ngoba kunezinzuzo ngaphezu kokuqina komdlalo wezinkuni okuqinile:
Ukuqhathanisa isivinini sokwakha: ukwakhiwa kwensimu ejwayelekile yezemidlalo. Thatha izinkantolo ze-basketball njengesibonelo .. Ngokuvamile ukwakhiwa okuqinile kwephakethe lenkundla yebhasikidi kuthatha izinsuku eziyi-15 ukuya kwezi-20, kuyilapho ukwakhiwa kwesitezi semidlalo yePVC kuthatha kuphela izinsuku ezingama-5-7.
Ukuqhathanisa ukusebenza kwesitezi: phansi okuqinile kwezinkuni kuthambekele ekuqhekekeni, ekudubuleni, kudliwe yinundu, isikhuhlu, ukumelana okungekuhle, ukungahambeki kahle kokuqina, kanye nesilinganiso sokuphinda sibe ngu-90%; kanye nezindawo zemidlalo zePVC zinokuphikisana okuhle nokuphikisana, Ama-antibacterial, kulula ukuwahlanza nokuwgcina, awukho umdlandla, akukho ukuqhekeka, ayikho i-arch, ayikho inundu, isikhutha, usayizi ozinzile, isilinganiso sokuphinda ufike ku-98%, ephephile futhi ethembekile, ungabavikela ngempumelelo abasubathi ekulimaleni.
Ukuqhathanisa kombala: Ukuqina komdlalo wezinkuni okuqinile kunombala owodwa, kuyilapho isisekelo semidlalo sePVC sinemibala ehlukahlukene, efanelekile izidingo zemibala ehlukene, futhi kulula ukuyiqondanisa, ngaphandle kokukhawulelwa phansi yindawo kanye nendawo.
Ukuqhathanisa ukusebenza kokuvikelwa kwemvelo: Ngenxa yokusebenzisa upende endaweni eqinile yokhuni yemidlalo, phansi akuyona indawo enemvelo futhi kukhishwe i-formaldehyde, kuyilapho ukuphakama kwezemidlalo kwe-PVC kungu-100% wamahhala we-formaldehyde kanye nokuphuma komoya okulimazayo, okunobungane nemvelo nokungcola.
Izinzuzo zephansi lezemidlalo lePVC
Ingaphezulu lesiteji sezemidlalo lepulasitiki eliqeqeshiwe lingakhubazeka ngokulingana lapho lithinteka, kufaka umatilasi ovalekile onomoya ngaphakathi.Uma uwa noma ushibilika, umphumela we-cushioning ohlinzekelwe ubuchwepheshe obuvaliwe bokusekela igwebu unganciphisa Ukulimala kwezemidlalo.
2. Inkinga yokuqhaqhazela:
3. Inkinga yokufaka isidlidliza:
Ukushayelwa okwenziwe ngabantu ngesikhathi sokuzivocavoca kuzodala ukudlidliza ngaphezulu kwephansi lezemidlalo lepulasitiki. Isakhiwo sephansi kumele sibe nomsebenzi wokumunca ukushaqeka, okusho ukuthi phansi kufanele kube namandla okuthola amandla wethonya. Amandla wethonya mncane kakhulu kunasemhlabathini olukhuni, njengasesiteji sikakhonkolo. Lokho ukusho ukuthi, lapho abasubathi begxuma bewa phansi, okungenani ama-53% omthelela kufanele adonswe phansi phansi, ukuze kuvikelwe i-ankle yomsubathi, i-meniscus, intambo yomgogodla nobuchopho, ukuze abantu bangaphazamiseki ngesikhathi sokuzivocavoca. Kubuhlungu. Umsebenzi wayo wokuvikela ubheka nokuthi umuntu angeke athinte abantu abasondelene nabo lapho behamba esitezi sezemidlalo sepulasitiki. Lona ngumqondo wokufaka i-vibration, i-vibration deformation kanye ne-deformation enwetshiwe echazwe ku-DIN standard yaseJalimane.
I-4, inkinga yokuqina kokushayisana:
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-12% yokulimala kwabadlali be-basketball yenzeka ngesikhathi sokuphola endaweni. I-coeffanele yokushayisana kwephansi lezemidlalo libonisa ukuthi phansi linokuphamba ngokweqile (okunciphisa ukuguquguquka kokushintshana) noma kushelela ngokweqile (okwandisa ubungozi bokwehla). Uma ucabanga ukuhamba nokuphepha komsubathi, lo mgubho wokugcwala kufanele ube yinani elihle kakhulu phakathi kuka-0.4-0.7. I-coefficient of fiction yephansi yezemidlalo yepulasitiki ivame ukugcinwa phakathi kwalokhu mgubho. I-coefficient of fiction yephrofeshini yezemidlalo epulasitiki yobungcweti ingu-0.57. Inokushayisana okwanele nokulinganiselayo okuqinisekisa ukuqina kokunyakaza nokuwugcina kuzo zonke izindlela Ukuvumelana nokusebenza njalo kokusebenza kwezingxabano ukuqinisekisa ukuhamba okuguquguqukayo nokujikeleza okungaphakathi kokuphazamiseka ngaphandle kokuvinjwa.
5. Inkinga yokuqina kwebhola:
Ukuhlolwa kokuqina kwebhola ukulahla i-basketball kusuka ekuphakameni kwamamitha ayi-6,6 ungene phansi kwezemidlalo ukuvivinya ukuphakama kwe-basketball. Le datha ivezwa njengephesenti, futhi ukuphakama okuphindwe kabili kwe-basketball phansi kokhonkolo kusetshenziswa njengezinga lokuqhathanisa ukubonisa umehluko ekuphakameni okuphindwe kabili. Imithetho yemidlalo yebhola yangaphakathi idinga ukuthi umhlabathi usetshenziselwe imiqhudelwano yezemidlalo noma ukuqeqeshwa, njengebhasikidi neminye imidlalo yebhola, nokuphindwaphindwa kwebhola, kanye nokulinganiswa kokuqina kokuphindaphindeka kwebhola phansi kwenkundla yokudlala kufanele kube kukhulu noma ilingane nama-90%. Ukubekwa phansi kwepulasitiki kwezemidlalo okuphezulu kunokuqina okuqinile nokuzinza kwebhola. Akukho phuzu elifile elitezi phansi. Ukuqina kwalo kokuqhathaniswa okuphindayo kungafinyelela ku-98%.
I-6, udaba lokubuya kwamandla kwezemidlalo:
Lokhu kubhekisa emandleni ezemidlalo abuyiselwe yiphansi lezemidlalo lepulasitiki lapho abasubathi bezilolonga ukuze bathuthukise ukusebenza kahle kokuzivocavoca.
I-7, inkinga yomthwalo wokugoqa:
Umthwalo ophethe umthwalo nokuqina kwephansi lezemidlalo lochwepheshe kumele kuhlangatshezwane nezidingo zomncintiswano nokuqeqeshwa. Isibonelo, lapho i-basketball rack ehambisanayo kanye nezinsizakalo ezihlobene zemidlalo zihanjiswa phansi, ingaphezulu nokwakheka kwephasi kungeke kulimale. Lokhu kuyindlela ejwayelekile yaseJalimane DIN. Izindinganiso nemibhalo eqondwayo yokugoqa
Umehluko phakathi kwesitezi sepulasitiki nesitezi esiqinile sokhuni Okuqukethwe okuhlobene